४ असार २०७८, शुक्रबार २०:५२ PM
उठ्दैछ बसन्तपुर दरबार, बढ्दैछ चहलपहल
११ श्रावण २०७७, आईतवार १२:२५ मा प्रकाशित
२०७७ श्रावण ११ आइतबार, काठमाडौं । वि.सं. २०७२ सालको भूकम्पले तहसनहस बनाएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण जारी छ ।
भुकम्पको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुस्त हुँदा विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको उक्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेकाे छैन । निर्माणका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागबीचको किचलोका कारण समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । अहिले भने काम जारी छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ०७२ काे भूकम्पका कारण २० जिल्लाका ७४५ वटा ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । हनुमानढोका क्षेत्रका पनि ११ वटा मठमन्दिर पूर्व रूपमा ध्वस्त भएकाे थियाे भने सात वटामा आंशिक क्षति पुगेकाे थियाे । तीमध्ये केहीकाे पुनर्निर्माण सकिएकाे छ भने केहीकाे पुननिर्माण कार्य भइरहेकाे छ ।
काेराेना भाइरस (काेभिड १९) महामारीकाे जाेखिम न्युनिकरणका लागि जारी गरिएकाे लकडाउन खुलेसँगै अहिले यहाँ मानिसहरूकाे चहलपहल पनि बढ्न थालेकाे छ । विदेशी पर्यटकहरू भने देखिएका छैनन् ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र सन् १९७९ अक्टोबरदेखि विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश भएको थियो । यो क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाका ७ संरक्षित क्षेत्रमध्येको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यस क्षेत्रलाई बसन्तपुर दरबार पनि भन्ने गरिन्छ ।
राजप्रासादको नाम ‘हनुमानढोका दरबार’ मल्लकालका राजा प्रताप मल्लले वि. सं. १७२९ मा दरबारको मुख्य प्रवेशद्वारनजिकै हनुमानको मूर्ति स्थापना गराएपछि हुन गएको हो । त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले वि. सं. १८२६ मा बसन्तपुर दरबार निर्माण गराएपछि यसलाई ‘बसन्तपुर दरबार’ पनि भन्न थालिएको हो ।
तीन जिल्लाका प्रजिअहरुको संयुक्त बैठक बस्द�